Indawo entle enegadi
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguAngela
Le ndawo iphantsi kweSunning floor yimizuzu nje yokuhamba ukusuka kwibhari ezimangalisayo kunye neeresityu. I-West Didsbury kunye ne-Withington inokuninzi okunikezwayo!
Inegumbi lokuphumla elimangalisayo / ikhitshi lokutyela, igumbi lokuhlambela kunye namagumbi okulala ama-3 amahle; kuquka 1 uKumkani, 1 kabini kunye 2 singles (iibhedi ibhedi) bonke kunye oomatrasi kakhulu rated ezintsha ukuqinisekisa ubuthongo kakhulu kamnandi ebusuku.
Kukho igadi ngasemva ukuze uphumle ngexesha lokuhlala kwakho. Indawo inamakhonkco othutho amakhulu ukuya kumbindi wesixeko kunye nesikhululo seenqwelomoya.
Indlu ibekwe kumgangatho ophantsi. Kukho igadi ethandekayo ngaphandle ngasemva elungele ukuphumla. Indawo yokuphumla/ekhitshini esandula kulungiswa inazo zonke iimod cons kwaye ibhedi yesofa ikhululekile kwaye ifanelekile kwiindwendwe ezongezelelweyo. Ndinokubonelela ngebhedi yokuhamba / isitulo esiphezulu ngesicelo sakho. (Ndicela undithumelele umyalezo ukuba ziyafuneka)
Nokuba ulapha ngempelaveki okanye uhlala ixesha elide kukho into yomntu wonke. I-Withington, iWest Didsbury kunye neFallowfield zinenkitha yeevenkile ezizimeleyo, iindawo zokutyela ezimnandi kunye neebhari ezipholileyo.
Unokuhlala ufumana ivenkile yekofu okanye kwindawo yokumisa ukuluma okanye iziselo ezimbalwa.
Iindlela zebhasi zasekhaya zinokukusa kuyo yonke iGreater Manchester.
I’m Angela from Manchester and I’m very proud of our city and what it has to offer. I enjoy travelling and spending time with my family.
Iindwendwe zinokufikelela kulo lonke igumbi. Nangona kunjalo, siya kumisa iibhedi kuphela ngenani eliceliweyo leendwendwe
Ndisebenzisa isitshixo sesefu ukuze ndizihlole ukuze ungadibani neendwendwe. Nangona kunjalo, ndingafumaneka ukuba uyandifuna ngexesha lokuhlala kwakho.
Ndisebenzisa isitshixo sesefu ukuze ndizihlole…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Withington